कलामा अनुभूति- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
नेपालगन्ज — रंगले जीवनमा के महत्त्व राख्छ ? रंगबिना जीवनको के अर्थ होला ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका थिए, खजुरमा जम्मा भएका बालिका र किशोरीले ।
कोहीले चित्रमार्फत्, कसैले गीत र कतिले शब्दमार्फत् आफ्ना अनुभूति छताछुल्ल पारिरहेका थिए । बाँकेको खजुरास्थित ज्ञानोदय माविमा जम्मा भएका उनीहरू निर्धक्क खुसी अनि कुण्ठालाई आफ्नै पारमा पोखिरहेका थिए । खजुराकी रमा पासी (नाम परिवर्तन) कक्षा सातसम्म विद्यालय जान पाइन् । १६ वर्षमा उनको बिहे भयो ।
त्यसपछि उनको पढाइ रोकियो । तर किन हो, बिहे गरे पनि उनी पतिको घर भने गएकी छैनन् । माइतीमा पढने वातावरण छैन । ‘सानैमा आमाबाबुले बिहे गरिदिएर पढ्न पाइनँ,’ उनले भनिन्, ‘अब ससुरालमा कसरी बस्ने हो सोचेर पनि डर लाग्छ ।’ उनको २० वर्षपछि बिहे गर्ने योजनाथियो । उनलाई औधि पढन मनलाग्ने बताउँछिन् ।
बालिका किशोरीले तयार पारेको कलाको प्रदर्शनीमा निर्धक्क आफ्ना भावना प्रस्तुत गरे । खजुरा ४ स्वस्तिका बूढा क्षेत्रीले पहिलो पटक रंगको महत्त्व बुझिन् । ‘रंगबिना त हामी अधुरो पो हुँदा रहेछौँ,’ उनले भनिन्, ‘यसअघि रंगसँग खेल्ने इच्छा पनि भएन । समय पनि थिएन ।’ बल्ल उनले रंगको महत्त्व बुझिन् । नीलो रंगले उनलाई खुसी अनि ऊर्जा दिन्छ । कालो रंग उनका लागि घृणाको प्रतीक हो । ‘रंगबाट जीवन महसुस गर्न सक्छौं,’ खजुरा ४ की दीपा सुनारले भनिन्, ‘चित्रमा रंग भर्नुपुरानो सोख हो ।’ उनले चित्रमार्फत् आफ्ना इच्छा अनि आवश्यकता प्रस्तुत गरेको बताइन् ।
कतिपय किशोरी तथा बालिकाले आफूलाई परेको भेदभाव तथा हिंसालाई गीत अनि कवितामार्फत प्रस्तुत गरे । उनीहरूले समाजमा सबै समान भएकाले लिंग, जात, वर्गीय विभेदको अन्त्यको कामना गरे । अपांगलाई समान रूपले हेर्न, नारीलाई सम्मान गर्न अनुरोध गरे ।
उनीहरूले महिलालाई सुरक्षित तथा आत्मसम्मानका साथ बाँच्न दिने वातावरण निर्माण गर्न माग गरे । कलाबारे सिकाउँदै आएकी सुनिता महर्जनले कलाबाट नबोलेर पनि कुरा बताउन सकिने बताइन् । ‘त्यहाँ भाषा होइन । अनुभूति नै सबथोक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कलामार्फत् थोरै बोलेर धेरै कुरा बुझाउन सकिन्छ ।’
प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०८:००
महँगियो सुन, खस्कियो बजार
तीजको सिजन सुरु भइसक्यो ।दसैं नजिकिँदै छ । राजधानीका सुन पसलहरूमा भने पहिला जस्तो न ग्राहकको चहलपहल छ, न व्यापारीमा उत्साह ।
श्रावण २८, २०७६ नुमा थाम्सुहाङ
काठमाडौँ — सुन छोइनसक्ने गरी महँगिएको छ । गत साताबाट तोलाकै ७० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । मूल्य बढेसँगै किनबेच भने ओरालो लागेको लाग्यै छ । तीजको सिजन सुरु भइसक्यो । दसैं नजिकिँदै छ तर राजधानीका सुन पसलमा पहिला जस्तो न ग्राहकको चहलपहल छ, न व्यापारीमा उत्साह । किनबेच झन्डै ८० प्रतिशतले घटेको छ ।
न्युरोडका सुन व्यवसायी रोमी शाक्यका अनुसार सुनको भाउ बढेदेखि दिनमा मुस्किलले २० प्रतिशत मात्र कारोबार हुने गरेको छ । ‘भाउ बढेपछि व्यापार खस्किएको छ,’ उनले भने, ‘तीजको सिजन सुरु भयो । दसैं पनि नजिकिँदै छ । सिजनकै सुरुवातमा व्यापारको अवस्था भने खस्कँदो छ ।’ यही भाउ केही समयसम्म स्थिररह्यो भने व्यापारमा केही सुधार हुने तर फेरि भाउ घटबढ भएमा भन्न नसकिने शाक्यले बताए ।
‘पहिला पाँच तोला लिने ग्राहक अहिले दुई तोला लिएर जान्छन्,’ उनले भने, ‘आवश्यक पर्नेहरू मात्र किनेर लान्छन् । गतवर्ष पनि यही बेला सुनको भाउ बढेर ६४ हजार रुपैयाँ तोला पुगेको थियो । अहिलेको जस्तो व्यापार शून्य नै भएको थिएन ।’ हेरिटेज गोल्ड प्यालेसका राजेश ताम्राकारले पनि अहिले व्यापार डामाडोल अवस्थामा पुगेको बताए । ‘भाउ बढेदेखि मान्छे आएका छैनन् । सुनको भाउ स्थिर रह्यो भने व्यापारमा सुधार हुन सक्ने आशा छ । घडबढ भएमा ग्राहक अन्योलमा पर्नेछन्,’ उनले भने ।
सुनको सिजन नभए पनि तीज सुरु हुन लागेकाले व्यापारमा केही सुधार हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढेपछि किन्ने ग्राहक अवश्यै कम हुन्छन् । ठुलै आवश्यक परेमा मात्र यस्तोमा सुन किन्न आउने गरेको ताम्राकारले बताए । धरान गहना गृहकी सुजिना महर्जन व्यापार पहिलेको भन्दा २५ प्रतिशतभन्दा घटेको बताउँछिन् ।
‘तीज पनि आउँदै छ । बिहेको पनि समय हो तर सुनको व्यापार भने छैन,’ उनले भनिन् । पास्नी वा कसैलाई उपहार दिनुपर्ने अवस्थामा मात्र सुन किन्ने ग्राहक आउने गरेको उनले बताइन् । सुन र चाँदीको व्यापारै खस्किएको छ । कतिपय ग्राहक सुनको भाउ घट्छ कि भनेर पर्खिरहेको उनले सुनाइन् ।
‘सुनको भाउ बढेपछि धेरै फरक पारेको छ । हामीले गरेको रिपोर्टमा २५ प्रतिशतभन्दा कम व्यापार भएको पाएका छौं,’ नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, ‘अहिले सुन किन्नेभन्दा पनि बेच्ने बढेका छन् । तोलाकै ७० हजार रुपैयाँ पाउने भएकाले आफूसँग भएको गहना बेच्ने बढेका हुन् ।’
सुनको भाउ स्थिर नभएकाले यो अवस्थामा जे पनि हुन सक्ने शाक्यले बताए । ‘भाउ स्थिर भए व्यापार सुधार हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकहरूपर्ख र हेर को सिद्धान्तमा छन् । सुनको भाउ घटेन भने किन्न त परिहाल्छ । त्यो अवस्थामा व्यापारले बजार लिन्छ ।’
प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०७:५८
गायिका अञ्जु पन्त भन्छिन् - 'मलाई प्रभाव पार्ने पुरुष जन्मिएकै छैन'